कारहरूमा फोर्स टच? Synaptics सोच्दछ | आईफोन समाचार
कारहरूमा फोर्स टच? Synaptics सोच्दछ
टचस्क्रिनहरू जताततै छन्। यद्यपि यो सत्य हो कि आईफोन एक टच स्क्रिनको साथ पहिलो फोन थिएन, २००-2007-२००2008 पछि यस प्रकारको स्क्रिनले बजारमा प्रभुत्व जमाउँछ। स्मार्टफोन, तर तिनीहरू अधिक र अधिक उपकरणहरूमा उपस्थित छन् (सामसु and र यसको फ्रिज एक विशाल ट्याब्लेटको साथ सोध्नुहोस्)। ठूला टचस्क्रिनहरू अधिक आधुनिक कारहरूमा र महत्त्वपूर्ण इन्फोटेनमेन्ट प्रणाली भएका छन् Synaptics यदि हामी पर्दा "महसुस" गर्न सक्दछौं भने यो धेरै उपयोगी हुन्छ भन्ने सोच्दछ।
त्यो विचारलाई ध्यानमा राख्दै, Synaptics कार सहायक निर्माता Valeo सँग मिलेर एक नयाँ प्रकारको कार प्रदर्शन सिर्जना गर्न। Synaptics को इरादा एक स्क्रीन सिर्जना गर्नु हो जसमा ClearForce कम्पनीको टेक्नोलोजी छ दबाब संवेदनशीलता y haptic प्रतिक्रिया, केहि चीज जुन एप्पल वाच वा आईफोन s एसका मालिकहरूले पूर्ण रूपमा बुझ्दछन्। यो स्क्रिनले एक अधिक सुरक्षित इन्टरफेस प्रदान गर्दछ जुन केवल एक औंलालाई समर्थन गर्दछ, एकै समयमा धेरै र ह्याप्टिक भ्यारीएबल, एक ड्राइभरले यसलाई हेरे बिना यसलाई हेरफेर गर्न अनुमति दिन्छ।
Synaptics कार मा फोर्स टच समावेश गर्न चाहन्छ
एक क्षणकाे लागी कुन निर्माताहरु यो थाहा छैन तिनीहरू यस प्रकारको पर्दा प्रयोग गर्दछन् वा कहिले उपलब्ध हुन्छन्। जे भए पनि, Synaptics सही छ जब यो आश्वासन दिन्छ कि यो अधिक सुरक्षित हुनेछ। थ्रीडी टचको साथ पनि त्यस्तै प्रकारले हुन्छ, जब हामी चाहेको पोइन्टमा पुगेका छौं, आईफोनले कम्पनको साथ संकेत गर्दछ। यदि हामी सडकमा जान्छौं, जब हामी ड्राइभि are् गरिरहेका हुन्छौं र हाप्टिक प्रतिक्रिया देख्छौं, तब हामी जान्छौं कि हामीले जहाँ हामीले चाहाँ खेलेका थियौं हाम्रो आँखा सडकमा नहेरीकन।
यो देख्न बाँकी छ कि सिन्याप्टिक्सले हामीलाई चक्रको पछिल्तिर अझ बढी सुरक्षा दिनको लागि दिमागमा राख्यो। यदि ती समयहरू कम गर्न सक्दछन् भने हामी हाम्रो आँखा ० बाट रोडमा लैजान्छौं यी प्रकारका उपकरणहरू चलाउनका लागि, उत्तम। यदि यो उनीहरूले योजना गरेका छन् वा छैन भने हामी समयमै थाहा पाउनेछौं।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » धेरै » कारहरूमा फोर्स टच? Synaptics सोच्दछ
चार एप्पल उपकरणहरू फेसबुक प्रवृत्तिको 'शीर्ष' 'मा श्रेणी दिन्छ
व्हाट्सएपको अर्को संस्करणमा नयाँ के छ